Wasiirka Arimaha dibada Jarmalka oo la kulmay hogaamiyaha Muca... | Universal Somali TV
Dowlada Jarmalka ayaa sheegtay in hogaamiyaha Mucaaradka dalka Liibiya Janaraal Khaliifa Xaftar uu aqbalay u hogaansamida xabad heshiiskii xabad joojinta ee dowlada caalamka aqoonsan yahay oo fadhigeedu yahay caasimada Tripoli.
Maleeshiyada ku sugan Bariga oo uu hogaaminayo Janaraalkan howlgabka ah ayaa dagaal kula jirtay xukuumada Fayez Al-Siraaj sagaalkii bilood ee la soo Dhaafay.
Wasiirka arimaha dibada Jarmalka Mr Heiko Maas oo Khamiista maanta ah booqday dalkan ku yaal waqooyiga Afrika ayaa ku dhawaaqay in Janaraal Xaftar uu u balan qaaday in uu jabin doonin xabad joojinta loogu gogol xaarayo dadaalada Nabadeed.
Mr Maas ayaa xaqiijiyay in Mucaaradka heesta Bariga Liibiya uu diyaar u yahay shirka dib u heshiisiinta oo ay la yeelan doonan dowlada ee ka dhacaya magaalada Berlin ee dalka Jarmalka.
Wadahadalo Nabadeed oo garwadeen ka ahaayeen Ruushka iyo Turkiga ayaa maalintii Sabtida lagu qabtay magaalada Moscow inkastoo Janaraal Xaftar uu dib ugu laabtay Liibiya maalintii Isniinta isagoo aan saxiixin heshiiska xabad Joojinta.
Kan-xigaQaramada Midoobay oo ka digtay Macluu...
Kan-horeDowlada Ciraaq oo si kulul uga hadash...
55,406,511 unique visits